सम्पादकीय/प्रकाशकीय : भीडको माझमा हामी
भनिन्छ, इन्टरनेटको आविष्कार, विकास, विस्तार र सहज पहुँचले विश्व साँघुरियो । यसको प्रयोगले विश्व त हातैमा कैद भइसक्यो । कतिपयको तर्क छ, इन्टरनेटको आगमनले विश्व झनै जटिल भयो । विशाल भयो, फैलियो । विश्व फैलियो वा साँघुरियो ? बहस हुँदै जाला । यो चाहिँ पक्कै हो कि इन्टरनेटको जगमा टेकेर गरिने अनलाइन पत्रकारिताले भने अभूतपूर्व फड्को मारेको छ ।
छापाबाट प्रारम्भ भएको नेपाली पत्रकारिता सूचना प्रविधिको उच्चतम् विकासले यतिबेला छापा सञ्चारमाध्यमसमेत अनलाइनमा पाइला राख्न वाध्य भएका छन् । नेपालको छापा पत्रकारिता रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइनसम्म आइपुगेको छ । अनलाइन पत्रकारिताले अक्षर, ध्वनि, चित्र र दृश्यसहित एकसाथ स्रोता, दर्शक र पाठकसमक्ष समाचार सामग्री पस्किने सामर्थ्य राख्दछ । यो छापा, रेडियो र टेलिभिजनको मिश्रित रुप हो । एकातिर भइरहेको घटनालाई उही समयमा विश्वसामु पस्कन सक्नु यसको विशेषता हो ।
मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनले सन् १९९८ मा नेपाल न्यूज डटकम नामक अनलाइन पत्रिका शुरु गर्‍यो । नेपाल न्यूजले आफैं समाचार राख्नुका साथै अन्य पत्रिकाहरूलाई समेत आफ्नो साइटमा प्रकाशन गर्ने सुविधा दिएर अन्य पत्रपत्रिकाहरूलाई समेत अनलाइनको संसारमा पाइला टेकायो । नेपालमा निजी क्षेत्रकै मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले वि.सं. २०५१ सालदेखि व्यवसायिकरुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न थाल्यो भने त्यसपछि आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको आक्रामक प्रवेशले इन्टरनेटको पहुँच आमजनतासम्म पुगेको छ । इन्टरनेटको सर्वसुलभ पहुँचसँगै स्वभावैले डेढ दशकअघिसम्म असम्भव जस्तो लाग्ने अनलाइन पत्रकारिता निकै फष्टाएको छ र आफूलाई मूलधारको पत्रकारितामा उभ्याउने सामथ्र्य जुटाएको छ । यो समय भनेको अनलाइनहरुको भेलबाढी आउने समय सावित भएको छ । निश्चित छ, भेल-बाढीसँगै काठ–कसिङ्गरहरु पनि उत्तिकै आउँछन् । कुनै निश्चित मापदण्डबिना बग्रेल्ती स्थापित अनलाइनहरुसँगै विकृति पनि उत्तिकै भित्रिएका छन् । केही अञ्जानमा र केही जानीबुझी वैचारिक पूर्वाग्रहको बर्कोमा छोपिएर आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै मौलाएको छ । पत्रकारिताको धर्म, मूल्यमान्यता, सिद्धान्त तथा पत्रकार आचारसंहिताको हेक्काबिना सम्प्रेषित समाचार सामग्रीले अनलाइन पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि ठूलै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । पत्रकारितामा विश्वास गुम्नु भनेको उसको मृत्यु हो । के हामी आफ्नै मृत्युलाई आमन्त्रण गरिरहेका छौं ? हामीले आफूलाई जीवित राख्न पनि एकपटक ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्नु आवश्यक छ ।
यही परिवेशमा हजारौंको भीडमाझ हामी आएका छौं । हाम्रो त्यस्तो ठूलो उद्घोष केही छैन । हजारौंको भीडमा टाढैबाट हेर्दा नै झ्वाट्ट देखिने हाम्रो प्रयास हुनेछ तर पत्रकारिताको आदर्श, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहितामा बाँधिएर । दैनिक अनलाइनले कसैको विरुद्धमा समाचार सामग्री पस्किने छ तर तथ्य र प्रमाणहरुको जगमा टेकेर । पाठक र स्रोताले मात्रै होइन सत्यतथ्य, सन्तुलन र विश्वसनीयतालाई सर्वोपरि ठान्दै समाचारकै पात्रले समेत समाचारको खण्डन गर्ने होइन कि लज्जाबोध गर्नेगरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा सत्य खोतल्ने हाम्रो प्रयास रहने छ । पत्रकारिताको आवरणमा राजनीतिक आस्था वा अन्य कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह पालेर ‘ठोक्ने’ र ‘बोक्ने’ प्रवृत्ति हाम्रा लागि अस्वीकार्य हुनेछ । स्वच्छ, मर्यादित र व्यवसायिक पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ । सकारात्मक सोच र कोणबाट हरेक क्षेत्रका आशा, आकाङ्क्षा र सपनाहरुलाई मल, जल र तेल थप्दै नेपाल र नेपालीको सुख र समृद्धिका लागि उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा थोरै भए पनि योगदान दिन सकियोस् भन्ने दिशामा नै हाम्रो गन्तव्य रहनेछ । यद्यपि, गफ दिन सजिलै छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु उत्तिकै कष्टसाध्य । त्यसका लागि आजैदेखि शुरु भएको छ– हाम्रो अग्निपरीक्षा ... ।